Akụkọ - Osisi ahịhịa na-eme ihe kwekọrọ na mkpa mmepe nke ịkọ ọkpọ
Anyị maara na nha nke akwukwo ebe metụtara ike nke photosynthesis, ma na-egosiputa itinye n'ọrụ nke ike anyanwụ, isi iyi ike. Anyị nwekwara ike ịhazigharị mpaghara ahịhịa iji melite mmiri eji arụmọrụ nke ahịhịa ndụ, ma nwekwa ikike ụfọdụ ịmịkọrọ fatịlaịza, site na nke kachasị anyị nwere ike ịhụ na nha mpaghara ebe a ka dị mkpa. Site n'ịgbanwegharị ahịhịa mpaghara, anyị nwere ike melite mmiri ojiji arụmọrụ, melite mkpokọta fatịlaịza were arụmọrụ, na-emecha nweta elu mkpụrụ. N'otu oge ahụ, ọ nwekwara uru nrụtụ aka dị mkpa maka atụmatụ ziri ezi nke ọdachi na-akpata ọdachi.
Mmesiri iji mata akụkụ akwụkwọ dị ezigbo mkpa nke na e tinyewokwa ihe ndị metụtara ya nke akụkụ mpaghara ahịrị. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ahụ nwere ike ịlele mpaghara ahịhịa nke ọdịdị ọ bụla na-adịghị agbanwe agbanwe, agba ọ bụla, ọkpụrụkpụ na ọdịnaya ọ bụla. Ihe mmụba ahụ na-agba ọsọ ọsọ, na oge iji tụọ akụkụ elu nke agụba ọ bụla bụ ihe na-erughị 1 sekọnd mgbe ịmalitechara ma kpoo ọkụ. Enwere ike ịchekwa data nke mpaghara ahihia na saịtị ma bulie ya na PC. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nwere ọrụ nke oge na ụbọchị, nke nwere ike ijikwa data ahụ dị ka oge.
Nnyocha e mere egosiwo na epupụta nke ahịhịa nwekwara ike ịmịkọrọ ihe, na-emepụta ifuru na mpụga mgbọrọgwụ, ma na-agba ọgwụ ahụhụ na ahịhịa. Otutu n’ime ha na etinye obi ha n’ime osisi site na obere pores di n’elu akwukwo. Ke adianade do, epupụta nke osisi ole na ole nwere ọrụ nke mmeputakwa, dị ka Begonia, nke a na-agbasa site na ịcha, Ọrụ nke epupụta enweghị ike ileghara anya. N'ime usoro uto osisi, anyị kwesịrị ịgba mbọ hụ nha mpempe akwụkwọ site na ngwa ihe eji atụ ihe.
Ojiji nke ihe eji eme ihe eji eme ihe nwere ike ime ka arụmọrụ nke ọma kawanye mma, n'ihi na ị kwesịrị ịpị bọtịnụ ahụ, ị ​​nwere ike nweta mpaghara agụba ozugbo. Izi ezi nke usoro a kariri nke usoro ihe eji eme ihe. Nke a bukwa mkpa mmepe nke nkenke ugbo na oru ugbo nke oge a.